Gormuu oogaday Al-bashiir In uu Sudan qabsaday malintii inqalabku Dhaca
Sunday May 12, 2019 - 09:05:22 in Maqaallo by Wariye Tiriko
wxuu ka qayb galay dagaalkii masar iyo isareal 1973 . Wuxuu ka soo shaqeeyay safarad sudan ee UAE Militraty Attache . Sanadkii 1975.Wuxuu noqday Taliyaha ciidamada dalayada ku booda(Parachute). Wuxuu nasiib u helay in uu noqdo Hogamiyihii inqalaki 30 jun 1989 dhacay ee xarakata islaamka ka danbeeysay (Natioanl Islamic Front).
Waxa lagu tiriyaa in uu xubin ka ahaa xarakata islamiyiinta ee hoogamiye ka ahaa Dr Xasan Abdala Turabi. inkastoo afganbiga laga soo shaqeeyay oo la dhamaystiray qorshiisa, isagu wuxuu ahaa sarkalkii ugu sareeyay darajo ahaan xarakata Islamiyiinta ama saraakisha milatariga ee inqalabka wada mid ahaa kaalintiisuna waxay ku akeed in u hor kaco saraakisha yaryar.Inqalabka inyar ka hor hawlo shaqo ayuu goblolka Kurdufaan ee galbeeedka sudan, laba cisho ka hor oo ku begneeyd 27 jun 1989 ayuu yimid khartuum sii uga qayb qaato hawsha inqaalibka oo dhaman diyaar ah. Subaxdii 30 jun sacaadu markaya heed3.AMayuu kaligii galay xerada taaliska guud ee cidamada si uu amar us siiyo dhaaman ciidamaad dalka kuna war geliyo in dalka la wareegeen militargu . isaga inta ayay aheed shaqdaiisu.Sarakiishii yar yareed ayaa hawsha badankeeda sii diyaariyay dhamaantoodna waxay kala qabsadeen hawlihii iyo goobihii lookala cayimay sida idaacada iyo Tvga airport xarumaha dawlada, iyo ugaadhsiga Sarkiisa dawalada ugu sareeysay ilaa Ra,siil wasarihii dawlada Sadiq Al-mahdi oo dhamaantood lasoo wada xidhay.
"Markaas ayaan oogaday in wadanka aan qabsnay oo xukunkii la weergnay inqaalabkiina hirgalaya”Madaxweyne Cumar Al Bashiir aan aahay...